Mufananidzo weAustralia seNyika yeMutemo, Kuenzana, uye Kodzero dzevanhu yaenda
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Australia Kuputsa Nhau » Mufananidzo weAustralia seNyika yeMutemo, Kuenzana, uye Kodzero dzevanhu yaenda
Australia Kuputsa Nhau • avhiyesheni • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • India Kupwanya Nhau • nhau • vanhu • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • Tourism Kutaura • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
"India iri kufema mweya wekufema," Gurukota rezvehutano reAustralia riri kutumira zvipo zvemhepo, masiki, magogorosi nemagirovhosi kunyika. Panguva imwechete Australia inoshora mugari wayo akabatwa muIndia kufa,
Kwenguva yekutanga munhoroondo yedu, ichave mhosva kune vamwe veAustralia kudzoka kumba vachibva mhiri kwemakungwa. Izwi rekuti hurumende yeNazi rinoshandiswa nevamwe.
Zvemutemo kana kwete, pane njodzi chaiyo iyo Gurukota rezvehutano reAustralia, Greg Hund chiito chinoita kuti maAustralia vafire mukati India.
ne Ositireriya's yekuparadzaniswa uye masisitimu ehutano, hupenyu hwaizoponeswa dai ivo vagari veAustralia vaendeswa kumusha kubva kuIndia. Kanganiso yakakomba naGreg Hunt.
Australia iri kuudza vagari vayo mukutambudzika kuti vari vega. VaAustralia vari kuyedza kudzoka kumba kubva kuIndia vanogona kusangana kusvika makore mashanu mutirongo uye / kana faindi ye $ 5. Kurambidzwa kwenguva pfupi ndiko kwekutanga munhoroondo yeAustralia zvinoita kuti zvive zvisiri pamutemo kuti vagari vayo vadzokere kumusha. Mutemo unotanga kubva Muvhuro uye uchaongororwa musi waMay 66,600.
Vagari ve9000 veAustralia vaida kuenda kumusha kubva kuIndia uye izvozvi vakatarisana nemirango yematsotsi uye kujeri kana vakaedza kudaro.
Human Rights Watch yakati maAustralia vane kodzero pasi pemutemo wepasi rose yekudzokera kunyika yavo. Human Rights Watch yakawedzera kuti Australia inofanirwa kuisa pfungwa pamitemo yakachengetedzwa yekuzvidzivirira kwevagari panzvimbo yekuisa simba mukuita mhosva kuvagari vemo kuti vatsvage kuchengetedzeka kumba.
Australia ichamisa ndege dzevatakuri dzakananga kubva kuIndia kusvika Chivabvu 15, kuti dzidzivise kupararira kwemhando dzakasiyana dzeCovid-19. PM Scott Morrison vanotiwo Australia ichatumira zvekurapa kuIndia, izvo zvave kunetsekana nekushomeka kwemibhedha uye oxygen zvinhu.
Hurumende yeAustralia inosungirwa kuunza vagari kumusha kwete kuvakiira kunze. Iyi inofanirwa kuve ndiyo hurumende yenazi yakanyanya kumboonekwa nenyika ino, anodaro Frank Bird, anotsamwa wekuAustralia.
Mukati memaawa anotevera makumi mana nemasere anodzoka vagari vachatyisidzirwa nemakore mashanu mutirongo kana vakapinda India mumasvondo maviri apfuura.
Kutaura chokwadi, ini handishamisike nemabatiro anoita mhosva yekudzosa vagari kubva India to Ositireriya, vamwe vedu vagara vachiziva isu tiri 'vane mamiriro' vagari, vakatumira tweet Nyadol Nyuon, wekuAustralia akaraswa muIndia.
Alan Sunderland akati: “Australia inofanira kunge ichihaya ndege dzakawanda sezvatinotaura kuti tiunze vagari vekuAustralia kumba kubva kuIndia nepatinogona napo. Makumbo ekudzoka eiyi ndege anofanirwa kunge akazara nematangi eoksijeni uye nezvimwe zvekurapa zvekukurumidza. Kuita chero zvakaderera pane izvozvo hazvinzwisisike. ”
Neha Mdouk akati: Ichokwadi chiri rusaruro icho vanhu vari kubhururukira kwachiri Ositireriya kubva India anogona kutarisana kusvika kumakore mashanu mutorongo. IU.S., Italy, UK, neSpain pavakaona nhamba dzinotyisa, hapana kana mhinduro yekufunga yakarangwa. Mumwe mutemo wevanhu vemavara, mumwe wevachena.
Sarudzo yakatsigirwa nesainzi? Kuzviparadzanisa nemunhu wese achiuya kubva kuchikamu ichocho cheAsia uye nezvimwe, zvakare kune vazhinji vanozotevera India vari kuenda kuThailand, Malesia vobva vadzokera ku Ositireriya, akawedzera Nicola.
Nyeredzi dzekiriketi dzekuAustralia Kane Richardson naAdam Zampa vadzoka kubva India kunyangwe hazvo hurumende yemubatanidzwa yakarambidza kufamba kubva ku coronavirus-yakaparadzwa nyika.
Peter Cronou akawedzera: Ositireriya, pakunyara kwaro, harina kutsigira kuregererwa kwekodzero dzezvepfuma pamajekiseni eCOVID-19 - zvichipa zviuru nezviuru kurufu.
MuAustralia Expat muIndia anonzwa: Hurumende yeAustralia iri kutaura kuti vagari vashoma vari India yakakosha zvishoma pane mamirioni ari Ositireriya.
"Mamiriro acho akadzikamiswa izvozvi uye tinoramba tine chivimbo chekuti tichakwanisa kubuda kune rimwe divi"
Mutungamiri weIndia anoita basa repamusoro PS Karthigeyan anotaura na @kochie_online nezve coronavirus-yakaparadza nyika yechipiri yenjodzi yechipiri wave ye… pic.twitter.com/w6CyOEr1vh
- ImAllNews (Australia) (@ImAllNews_AU) Dai 2, 2021
Amit Kumar muAustralia anofananidza India neAustralia: Zvimwe chete muno Ositireriya murume kana mukadzi. 3x yakakura pasi pasi kupfuura India uye huwandu hwevanhu hwangori ma2.5 crore, 55x mashoma uye 150x mashoma huwandu hwevanhu nemhepo yakachena yakawanda, yakakwira zvakanyanya pamunhu mari nezvimwewo zvakadaro. Izvo zviviri hazvigone kuenzaniswa!